The Tomorrow War (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
သိပ်ပံအကျရှငျဇာတျကားကောငျးတှကွေိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှအေတှကျ နာမညျကွီးဟောလိဝုဒျမငျးသား “ခရဈဈပရကျ”က ဒနျဖျောစတာအဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ The Tomorrow War ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးထှကျလာပါပွီ. စဈတပျကနအေငွိမျးစားယူပွီး ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျမှာ ဇီဝဗဒေဆရာလုပျနတေဲ့ ဒနျတယောကျ တဈနမှေ့ာ မိသားစုနဲ့ပါတီလုပျနရေငျးက အနာဂတျနောကျနှဈ ၃၀ (၂၀၅၁) ကလူတှရေောကျလာပွီး ဂွိုဟျသားတှကေိုတူတူလကျတှဲတိုကျထုတျဖို့စဈကူချေါတဲ့အခါ အခြိနျခရီးသှားနညျးပညာကိုအသုံးခပြွီး
အနာဂတျကိုသှားခဲ့ပါတယျ ဝိုကျစပိုကျလို့ချေါတဲ့ဂွိုဟျသားတှကေ တဈကမ်ဘာလုံးအနှံ့ရှိနပွေီး လူသားမြိူးနှယျစုဟာလဲ ပကျြသုဉျးတော့မယျ ဆဲဆဲအန်တရာယျ ကွုံတှနေ့ရေပါတယျ ဒနျတို့ ဒီအနာဂတျစဈပှဲမှာ ဂွိုဟျသားတှကေိုတိုကျထုတျနိုငျမလား အနာဂတျခရီးသှားတာကကော ဘယျလိုဆကျဖွဈလာမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆကျလကျကွညျ့ရှုလို့ရပါပွီ
ဒီဇာတျကားကို အညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ JJ ဖွဈပါတယျ
သိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် နာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်မင်းသား “ခရစ်စ်ပရက်”က ဒန်ဖော်စတာအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ The Tomorrow War ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးထွက်လာပါပြီ. စစ်တပ်ကနေအငြိမ်းစားယူပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ဇီဝဗေဒဆရာလုပ်နေတဲ့ ဒန်တယောက် တစ်နေ့မှာ မိသားစုနဲ့ပါတီလုပ်နေရင်းက အနာဂတ်နောက်နှစ် ၃၀ (၂၀၅၁) ကလူတွေရောက်လာပြီး ဂြိုဟ်သားတွေကိုတူတူလက်တွဲတိုက်ထုတ်ဖို့စစ်ကူခေါ်တဲ့အခါ အချိန်ခရီးသွားနည်းပညာကိုအသုံးချပြီး
အနာဂတ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ် ဝိုက်စပိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဂြိုဟ်သားတွေက တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ရှိနေပြီး လူသားမျိူးနွယ်စုဟာလဲ ပျက်သုဉ်းတော့မယ် ဆဲဆဲအန္တရာယ် ကြုံတွေ့နေရပါတယ် ဒန်တို့ ဒီအနာဂတ်စစ်ပွဲမှာ ဂြိုဟ်သားတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မလား အနာဂတ်ခရီးသွားတာကကော ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလို့ရပါပြီ
ဒီဇာတ်ကားကို အညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ JJ ဖြစ်ပါတယ်
Option 1 teracloud.jp 651 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 651 MB SD (480p)
Option3teracloud.jp 1.6 GB HD (1080p)
Option4onedrive.live.com 1.6 GB HD (1080p)
Option5teracloud.jp 4.4 GB 4k
Option6onedrive.live.com 4.4 GB 4k